Unxenxa abantu ukuthi bavume ukujova umgomo weCovid-19 uKhoza wePSL - Impempe
Unxenxa abantu ukuthi bavume ukujova umgomo weCovid-19 uKhoza wePSL
UDkt Irvin Khoza
Usihlalo wePremier Soccer League (PSL) ne-Orlando Pirates, uDkt Irvin Khoza usenzenze abantu bakuleli ukuba bangangabazi ngokujova umgomo wokuvikela iCovid-19 esibulele inqwaba yabantu.
UKhoza uthi yena usevele uwujovile lo mgomo, futhi akanankinga ndawo. Kuzokhumbuleka ukuthi kunokungabaza kubantu abaningi ngokuphepha kwemigomo ekhona njengamanje.
“Ukusebenza kwemigomo ekungabazeki. Eminyakeni edlule imigomo isisizile siyizwe ukunqanda ukugula njalo nokukhulisa isizwe esinempilo,” usho kanje esitatimendeni esikhishelwe abezindaba ngoLwesibili ekuseni.
“Umhlaba usufana nesigodi esisodwa. Ukludayiselana nokuhambelana kwamazwe ahlukene kusezingeni la sidinga ukuvimbela ukuthi izifo okungenzeka zibheduke ezindaweni eziqhelile kithi kodwa zibhebhetheke kuhle komlilo wequbula.
“Ukuphepha ngokwezempilo emhlaneni kubalulekile. Wonke umuntu okhona phansi komthunzi welanga angatheleleka. Mina sengiwujovile umgomo.
“Lokho angikwenzelanga ukuphepha kwami nje kuphela, kodwa nokwalabo okungenzeka ngihlangane nabo. Kunezinto ezibalulekile emhlabeni okungathi uma singazenzi ngokubambisana sonke, zingenzeki,” kuchaza uKhoza.
Uqhube wathi ukujova lo mgomo kufana nokushayela ngokucophelela emgwaqeni ukuze ungafaki izimpilo zabanye abantu abasebenzisa umgwaqo engcupheni.
“Uma isikhathi sakho sokuthi ujove lomgomo sesifikile, ngicela wenze okufanele. Sesizuze izinto ezimangalisayo uma senza izinto ngokubambisana, senze into efanele. Nalesi yisikhathi salokho,” kuphetah uKhoza.
Previous Previous post: Batholwe beneCovid-19 abadlali ababibili be-Al Ahly, abasezi kwiSundowns
Next Next post: Kuzonuka udaka uma ike yaqhuzuka iStellies kwiSwallows